Izinhlobo ezikhethekile ezisetshenziswayo | I-stockmarca
Ukuthi bazokwazi ukukuhlukanisa ibhizinisi
Sonke siyakwazi ukubaluleka kokuhlinzeka ngomkhiqizo ohlukile futhi oyiqiniso ukuze umthengi akuvakashele futhi athenge kuwe esikhundleni somncintiswano wakho. Kungakho kwa-Stockmarca sihlanganisa ukusatshalaliswa kwemikhiqizo yezemfashini eyaziwayo ekhanga abathengi, kanye neminye imikhiqizo ekhethekile futhi ekhangayo ezobenza bathandane nokuthi bazothola kuphela ezitolo zamakhasimende ethu.
Sinezivumelwano nemikhiqizo ehlukile esiyisabalalisa kuphela. Ukukunikeza ngaphandle kwenkokhelo eyengeziwe yokuhlinzeka ngemikhiqizo oyothola kuphela endaweni yangakini.
Sikunikeza nge-assortment enamandla yezingubo zakamuva zemfashini ngamanani ashibhile esiwavuselela isonto nesonto futhi sikuthumela ngamahora angama-24/48.
Imikhiqizo yethu ekhethekile inomugqa wokusabalalisa obanzi ozokunikeza ukuguquguquka uma kuziwa ekwenzeni ukukhuphula kanye nokwandisa ukuthengisa kwakho.
Wazalwa ngonyaka we-2008, i-QGuapa Milano ingumphumela wokuqanjwa, ukuzibophezela kanye nokuzinikela kweTessile Ranieri Group. Kubangelwa isifiso esinamandla semfashini kusuka eminyakeni engaphezu kwengama-40 yesipiliyoni. Ngokuhambisana nokugcotshwa okuhle okuthunywe umsebenzi wokuhlinzeka ngobuhle nokwinkimbinkimbi ngisho nasezenzakalweni ezihlelekile okungenani. Ukubheja kwekhwalithi enhle kakhulu / amanani.
I-Sorbino ingumphumela weminyaka engamashumi amahlanu yesipiliyoni emkhakheni wezingubo ngaphakathi kwemfashini yase-Italy. Ukuqinisekisa ukukhiqizwa okuhambisana namazinga okucwaninga aphezulu kakhulu ezindabeni zokwakhiwa nekhwalithi. Ukwakha amaqoqo endoda yesimanjemanje kuhlale kulayishwa okusha, ubuhle nobumsuka.
INorth Face yinkampani yaseMelika egxile ezingutsheni, uboya, izicathulo kanye nemishini yabagibeli bezintaba, abagibeli, abagibeli bezintaba, abagibeli bezintaba, abagijimi bokukhuthazela kanye nokusetshenziswa kwansuku zonke.
INapapijri® ivuselela izingubo ezihlanganisa izinto ezintsha kanye nesitayela esiqaphelayo.
Lemikhiqizo kanye neminye eminingi engaveli lapha ingasatshalaliswa kuphela esitolo sakho kuya ngamalayisense wokusabalalisa womkhiqizo ngamunye. Xhumana nathi futhi sizohlaziya udaba lwakho.
Yasungulwa ngonyaka we-2002 kanye nokwanda okubanzi e-Italy, amaqoqo we-ARTIGLI abonakala ngesitayela sanamuhla ngokuhambisana nezindlela zomhlaba jikelele. Kunikezelwa kwabesifazane ukunaka inani lobufazi elihlala lithanda ukuthola izingubo ezintsha zesithombe zazo. Ukuqinisekisa ingubo ngayinye inani elihlukile lesitayela saseNtaliyane
U-Etiem uyinkampani eyakha isiGalathiya ngokunwebeka okuqinile komhlaba wonke okuzibophezele emisha ekwakheni kanye nekhwalithi ephezulu yendwangu, enikela ngezingubo zokugqoka zabesilisa nabesifazane. Kusetshenziswa izindwangu zobuchwepheshe zakamuva ukudala amaqoqo endawo yonke phakathi kwehhovisi nomlingo wedolobha lapho likhanyisa amalambu alo.